कोरोना बिरुद्दको खोप लगाएकी काठमाडौँकी ६० वर्षीय महिलाको शरीर पनि बन्यो चुम्बक, भदाले भिडियोमै देखाए ! हे’र्नुहोस् (भिडियो) – SUDUR MEDIA
कोरोना बिरुद्दको खोप लगाएकी काठमाडौँकी ६० वर्षीय महिलाको शरीर पनि बन्यो चुम्बक, भदाले भिडियोमै देखाए ! हे’र्नुहोस् (भिडियो)
June 14, 2021 AdminLeaveaComment on कोरोना बिरुद्दको खोप लगाएकी काठमाडौँकी ६० वर्षीय महिलाको शरीर पनि बन्यो चुम्बक, भदाले भिडियोमै देखाए ! हे’र्नुहोस् (भिडियो)
काठमाडौँ, ३१ जेठ । करिब डेड वर्षा अगाडी चिनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको महामारी यतिबेला विश्वभर पुगिसकेको छ । कोरोना भाइरस देखिएको करिब वर्ष दिन पछी त्यस बिरुद्दको भ्याक्सिन पनि उत्पादन भैसकेको छ । हाल उक्त भ्याक्सिन धेरै देशले सुरु गरिसकेका छन । तर अधिकांश मानिसले उक्त भ्याक्सिन लगाउन पाएका छैनन् ।
नेपालमा पनि धेरैले कोरोना बिरुद्दको भ्याक्सिन लगाई सकेका छन । कतिले पहिलो डोज मात्र लगएका छन भने कतिले दुवै डोज लगाई सकेका पनि छन । यसै बीच कोरोना बिरुद्दको खोप लगाएका एक भारतीय नागरिकको शरीर चुम्बक बनेको खबर भाइरल नै भएको थियो । तर त्यसको केहि दिन पछी नै नेपालमा पनि त्यस्तै असर देखिएको एक महिलाको भिडियो सार्बजनिक भएको छ ।
काठमाडौँ असन निवासी ६० वर्षीय संगीता तिलिमाको शरीर पनि चुम्बक बनेको भन्दै उनका भदाले भिडियो बनाएका हुन् । संगीताले ४ दिन अगाडी मात्रै भेरोसेल भ्याक्सिन लगाएका थिए । मध्यपुर हस्पिटल तथा कोरियन नेपाल अस्पतालका अर्थोपेडिक सर्जन डा. मनिष प्रधानाङ्गले आफ्नी फुपू संगिताको शरीरमा चुम्बकीय शक्तिजस्तै भएको बताउँदै फेसबुकमा भिडियो सेयर गरेका थिए ।
उनले कोरोना बिरुद्दको खोप लगाएका मानिसको शरीर चुम्बक बन्ने खबर सुनेपछि आफ्नो फुपू संगीताको शरीरमा त्यो परिक्षण गर्दा त्यस्तै पाएको बताए । भिडियोमा देखिए अनुसार संगीताको पाखुरामा चाबी, चम्चा, थाल आदी राम्ररी टासिएको छ । त्यस्तै मनिषले अर्का एक बालकको पाखुरामा सोहि सामग्री टास्ने कोशिस गर्दा नटासिएको पनि देखाएका छन ।
मनिषले उक्त भिडियो शेयर गर्दै भनेका छन – ‘विगत केहि दिन देखि कोभिड-१९ भ्याक्सिनले मानिसलाई चुम्बक बनाएको भिडियो खबर आइरहेको छ । मेरो आन्टीले पनि पहिलो खोप लगाएसंगै त्यस्तै असर देखिएको छ । यो कुरा सुनेर म पहिले त धेरै अलमलमा परे । तर एउटा कुरा मलाई स्पष्ट छ कि कोरोना भ्याक्सिन लगाए पछी उनि कोरोनाबाट भने पहिले भन्दा सुरक्षित छिन । शरीरमा चुम्बकीय शक्ति देखिनुमा सायद अरु कारण पनि हुन सक्छ । यस बारे धेरै अनुसन्धानको आवश्यक छ । ‘
भिडियो यहाँबाट हेर्नुहोस :
आज नेपालमा थप २,९१८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ५,१४७ जना संक्रमणमुक्त
यो हप्ताको राशिफल हेर्नुहोस्ः मिति २०७८ साल बैसाख १२ गते आइतबार देखि १८ गते शनिबारसम्मको…..
मदनकृष्णले भेटे ‘फुलबुट्टे सारी’ गाउने युगान्डाकी बियोन्स, पूरा भयो उनको सपना बियोन्स खुशीले यसरी रो,इन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल साउन ०७ गते बिहीबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ जुलाई २२ तारिख
सुनचाँदीको मूल्य फेरी ह्वात्तै घट्यो, यस्तो छ आजको भाउ….. (1,678)
अन्माएर गाडीमा चढीसकेकी बेहुली अंकललाई अंगालो हालेर बेहुलाको घर नजाने भन्दै नछोडेपछी भिडियो भयो भाइरल ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (1,586)
आज शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो….. (1,445)